Etu Ntutu Eke & Ntutu isi Ntugharị | Natural Regain
Weghachite ntutu & Regain ™
Hairgha ntutu na –eme ka ntutu dị adị dị nro site na iji ụdị kachasị dị mfe nke na-abawanye ike cellular ma na-akwado usoro nke n'efu Qi.
Qi (akpọrọ Chi) bụ okwu maka ike ndụ, ikike dị mkpa na-aga n'ihe niile dị ndụ. A na-eji Qi tonics eme ihe na nke anyị ntutu isi usoro iji nye ike n'ọrụ dị mkpa maka mmepe nke ntutu.
Na TCM (Omenala China Omenala) a na-ahụta ntutu dị ka mgbakwunye ọbara na inye ọbara zuru oke dị mkpa maka itolite ntutu dị mma. Guo otu esi eji TCM emere ihe okike ọgwụgwọ ntutu isi gwọọ isi nkwọcha na azụ alopecia.
9 nke osisi kachasị dị ebube n'ụwa ka etinyere n'otu usoro nke na-emebi njikwa ọgwụ nke ihe ọkụkụ dị ọcha n’okpuru gburugburu ebe obibi nke teknụzụ dị elu nke teknụzụ ka emebere ka ọ bụrụ ihe eke. ntutu isi na-agwọ ya.
Ihe Mere O ji arụ ọrụ
Natural Regain bụ '5a-reductase' enzyme inhibitor na-egbochi homonụ DHT n'ụzọ dị mma site na ịwakpo ntutu isi nke bụ ihe kacha akpata ntutu isi n'ụwa niile.
-Anyị ntutu Regiso Recipe-
Nwee Ighata Igha
Akụkọ ihe ịga nke ọma bụ àmà
Site na We Blog
- Mee ka anyị na anyị na-
Mmelite nke 2020 na Mbelata ntutu
Baldness Nwere Ike Obụ Nsogbu na Ntorobịa Obere na 2020 Maka nchọpụta e mere na nso nso a,…
Ikike Ikike dị iche iche na-akpata Ọnwụ Isi?
Echiche orgha Ka Ọ̀ Bụ Eziokwu? Fọdụ na-ekwu na ọ bụ isi ihe kpatara isi nkwọcha. Mana…
Igosi nke Anyanwụ Nwere Ike Balbụ Isi
Anyanwụ dị mma maka ntutu mana oke dị njọ. Chọta Ihe ...